WordPress NiceAdmin Plugin Version 1.0.0 Navoaka | Martech Zone
WordPress NiceAdmin Plugin Version 1.0.0 Navoaka
Alahady 8 aprily 2007 Alarobia, Jolay 4, 2007 Douglas Karr
Taorian'ny herintaona nijereko ny interface interface an'ny administratera WordPress dia tena nandreraka azy aho. Alpesh nahita ny hevitro tao amin'ny bilaogy iray hafa ary nandefa tamim-pahasoavana ahy plugin WordPress admin izay niasan'ny mpamorona iray hafa. Nanova ny plugin aho tamin'ny alàlan'ny fampiasana sary avy amin'ny tranokala WordPress ary nanangana fomba fanoritana admin vaovao. Ity misy pikantsary:
Tsy manova ny fampiasana na ny fiasan'ny WordPress na inona na inona izany fa manamora kokoa ny fijerena azy fotsiny! Manantena aho fa tianao izany!
Misaotra manokana an'i Sean at Geek Miaraka amin'ny Laptop. Sean's dia nibanjina ny mason-tsivana CSS ka nangataka ny fanampiany aho mba handrindrana tsara ireo style alohan'ny hamoahana azy. Misaotra, Sean!
Sintomy ny Plugin WordPress avy amin'ny Pejy Tetikasa
Ho anao rehetra izay manana bilaogy WordPress, dia tena tiako ny nampitanao ny teny momba an'io sy ny iray hafa Projects. Toy ny mahazatra, raha voatanisa ny làlan-kaleha nataonao dia novonoiko ny nofollow mba hahazoanao loka amin'ny rohy! Misaotra!
Apr 8, 2007 ao amin'ny 11: PM PM
Fahafinaretako ny nanampy tamin'ity plugin ity ary rehefa mandeha ny raharaha dia hanao asa bebe kokoa aho raha ilaina izany.
Apr 9, 2007 amin'ny 12: 01 AM
Toa tsara izany dia hampiasa azy!
Apr 9, 2007 amin'ny 8: 22 AM
Apr 9, 2007 amin'ny 1: 04 AM
Asa tsara Doug. Tokony hiantso azy io hoe Extreme WordPress Makeover 🙂
Apr 9, 2007 amin'ny 8: 21 AM
Mila mitranga ny fihoaram-pefy manaraka, AL! Manova ny endrika sy ny fahatsapana izany - saingy tokony ho akaiky ny andro ahafahan'ny Admin manana hoditra sy lohahevitra raha tsy mila plugin!
Angamba ny lohahevitra admin dia tokony ho admin.css ao amin'ny lahatahiry lohahevitra hahafahan'ny mpampiasa manangona azy ireo miaraka!
Apr 9, 2007 amin'ny 8: 04 AM
Asa tsara any Doug .. Tsoriko fa tsy te ho faty aho nahita ny tontonana admin mitovy hatrany hatrany ..
Ny zavatra tsara indrindra dia ny fitazonana ireo fiasa ary ny fanovana ihany no fanovana ny endriny .. Izay nilaiko fotsiny. 😀
Apr 9, 2007 amin'ny 8: 19 AM
Apr 9, 2007 amin'ny 8: 53 AM
Tiavo ny efijery vaovao. Nahita olana iray anefa. Tsy mety ny efijery fampisehoana / Tonian-dahatsoratra. Kely loatra ny varavarankely kaody raha tsy ampiasaina. Kely izy toy ny fijerin'ny thumbnail.
Azonao atao ve ny mandefa pikantsary amiko ary OS / Browser inona no ataonao?
Apr 9, 2007 ao amin'ny 5: PM PM
Handefa pikantsary ho anao. Mampiasa xphome 5.1.2600 Service pack 2 build 2600 sy IE 7.?
Nanao rakitra pdf tamin'ny screendump aho. Handefa hametaka azy aminao io raha afaka mahita ny mailaka addr anao aho.
Tena olana manahirana izany! Hita fa lasa habe 1 na 2 px ny haben'ny endritsoratra. Na dia override azy amin'ny css aza aho dia tsy mahazo valiny marina. Arrrgh, IE !!!
(PS: Mandehana Firefox!) 🙂
Fantaro ny marina, tsy mampiasa an'io efijery io aho hanovana ireo rakitra. Ataoko eo an-toerana izany avy eo ftp up. Saingy nahatsapa ho adidy aho hampahafantatra anao izany.
Hita eto ny screendump:
Apr 9, 2007 ao amin'ny 7: PM PM
Tsara izany. Tsy hitako izay nataon'ny developer hafa fa milay izy ity.
Misaotra tamin'ny fanonona 🙂
Tiako ity menio lohahevitra ity, tena matihanina. Apetrako ao amin'ny bilaogiko 8 rehetra ireo, ary ataoko ho plugin mahazatra ho an'ny mpanjifako bilaogy.
Apr 14, 2007 amin'ny 1: 30 AM
Tahaka izay nolazain'i Ross, izaho dia miaina izany olana izany amin'ny IE7 + WinXPSP2.
Salama i Mozilla.
Toa TENA mitovy amin'ny taloha ilay izy. Inona no novainao tamin'ny modely mba hahasoa azy kokoa? Nisy zavatra manokana ve nahatonga ny fanovana?
Ny fiovana dia hatsarana avokoa, Thor. Mora kokoa amin'ny maso ny endritsoratra sy ny endriny. Tiako ny maka tsatoka amin'ny famerenana manoratra ilay zavatra fidirana nefa tsy eo anilako ny fotoana. 🙂
Apr 27, 2007 ao amin'ny 11: PM PM
Hisy fanamboarana ho an'ny IE ve ato ho ato? Kely dia kely ilay boaty fanovana lohahevitra.
Oct 6, 2007 amin'ny 7: 08 AM
Nanisy fanamboarana kely ho an'ny WordPress 2.3.
12 Jan 2008 amin'ny 9:12 PM
Nahita ireo fanehoan-kevitra ireo tamin'ny volana aprily lasa teo, inoako fa nahita ny haben'ny “thumbnail” mitovy amin'ny sokajy fanovana…